Ogaden News Agency (ONA) – Jawaabta JWXO ay ka bixisay Warbixintii Kooxda Ilaalinta Somalia iyo Eretreeya (SEMG)
Posted by ONA Admin	/ November 8, 2014
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ayaa warbixin dheer kaga jawaabtay xadgudubka lagu sameeyay taariikhda ururka iyo qadiyadda shacabka Ogadenya oo kooxdan loo xilsaaray ilaalinta cunaqabataynta xagga hubka ah ee la saaray Somaliya iyo Eretreeya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano SEGM ay si badheedha ah u faafiyeen. Warbixinta ururka oo meela badan taabanaya ayaa qaybta ugu hireysa oo ah Gogol-Dhigga Warbixinta aan soo tarjumnay. Waxaan isku dayi doonaa qayba kale inaan kasoo saarno warbixintan qiimaha leh;
Warbixinta JWXO oo ku socota Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ayuu ururka ku muujiyay inay diidan yihiin habka ay Guddigan usoo qoreen Warbixinta sumadeedu ahayd S/2014/727 ee soo baxday bishii October 13, 2014.
Waxay JWXO ku sharaxday warbixinteeda inhalganka JWXO uu yahay mid ay ku difaacayso jiritaanka iyo hadafka ururka, ka dib markuu nidaamka Itobiya weerar ku qaaday 1994kii maamulkii ka dhisnaa Ogadenya ee shacabka ay sida xorta ah usoo doorteen. Waxay ku xustay JWXO warbixinta in Xukuumada Itobiya ay waligeedba takooreysay oy gacan bidixaynasay isla markaana u gaysatay shacabka Ogadenya dambiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo haya’adaha Xuquuqul Insaanka iyo Qaramada Midoobay labadaba ay xaqiijiyeen.
Warbixinta JWXO waxay ku sheegtay in Guddiga SEMG ay ku xadgudbeen Asluub Wanaaga QM u dajisay habka baadhitaankooda taasoo ahad inay raacaan nidaamka ay sumadeedu ahayd (S/2006/997), hasa ahaatee waxay siday doonaan u kala doorteen dhacdooyinkii isla markaana waxay ka muuqataa eexashadooda markay diideen xaqqa JWXO ay u leedahay inay jawaab ka bixiyaan waxyaabaha lagu eedeynayo int aanay soo saarin warbixinta. Waxaa intaa dheer Guddiga SEMG waxay si ulakac ah u garab mareen Qadiyadaha Asaasiga ah iyo Xaqiiqada meesha taala, taariikhda iyo arimaha saamaynta ku leh nabadda iyo xasiloonida dadka ku nool Geeska Afrika si ay sawir aan jirin uga warbixiyaan.
Guddiga Cunaqabataynta Somaliya iyo Eretreeya (SEMG) waxay warbixitooda ku sheegeen eedeymo khatar ah oo ka soo horjeeda JWXO oo muujinaya inay JWXO ku xadgudbeen qaanuunka dawliga ah. Jawxaabta JWXO waxay ku xuseen arimaha soo socda;
1aaad- Inuu guddiga warbixintiisa ku dhisay been la dhoo-dhoobay oy ka heleen Sirdoonka Itobiya iyo maamulada Somaliyeed ee taxaalufka laleh, kuwaasoo dana gaar ah ka leh eedaymaha loosoo jeediyay JWXO.
2aad- eedeymaha inta ugu badan waxaa laga qoray xubno JWXO oo la afduubay ama la qabtay oo xabsiyada Itobiya ku jira kuwaasoo la cadaadinayo (inkasta oo guddiga SEMG ay ka gaabsadeen inay sheegaan magacyadooda). Arintaasoo ku ah xadgudub Qaanuunka Dawliga iyo Xuquuqul Insaanka dadka xabsiyada ku jira.
3xaad. Guddiga SEMG wuxuu jabiyay tilmaamihii QM u dajisay guddigan si warbixintooda u noqoto mid lagu kalsoon yahay oo dhex-dhexaad ah.
4aad- Waxuu Guddiga SEMG si ulakac ah isu garab mariyey qadiyadaha asaasiga ah iyo waaqica dhabta ah, taariikhda iyo arimaha saamaynta ku leh nabadda iyo xasiloonida dadka ku nool Geeska Afrika iyagoo ka bixiyay sawir aan jirin.
Eedaynta ah in JWXO ay fadhiisimo ku yeelatay oy ka hawl gasho Somaliya waa mid aan waxba ka jirin oo muujinaysa in aanay aqoon u lahayn Gudiga SEGM taariikhda iyo ahdaafta JWXO. Taliska Ciidamada JWXO waxaa laga asaasay oo saldhigoodu yahay Ogadenya. Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLLA), waa ciidan tira badan oo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ka kooban saldhigyana ku leh gabi ahaan Ogadenya. In lasoo raro saldhigyadaa ma aha arin si sahlan looga qarin karo ciidamada AMISOM iyo Sirdoonka caalamka oo dhamaantooda kawada hawlgala Somaliya oo baadhaya meelkasta oo ka mid ah dalka Somaliya.
JWXO waligeed kuma aanay fikirin si toos ah iyo si dadban toona inay xidhiidh ula yeelato kooxda Al-Shabaab. Waxayna JWXO kasoo horjeedaa habka ay u hawlgalaan iyo hadafka ay leeyihiin Al-Shabaab. Waxaa kaloo la ogyahay in xubna ka mid ah JWXO ay dhibaato kala duwan u gaysteen Al-Shabaab. Waxaa intaa dheer in Al-Shabaab ay ku eedeeyaan JWXO inay ka mid yihiin isbahaysiga Somalida ee la dagaalamaya kooxdan. Guud ahaan, marar kala duwanayay ururada Somaliya isku haysta uu midwalba ku eedeeyay inay JWXO taageerayaan kooxda kasoo horjeeda iyagoo kaga doonaya taageero Itobiya. Waxaa muuqata inuu Guddiga SEMG adeegsaday eedeymahaa raqiiska ah iyagoo doonayay inay abuuraan xidhiidh aan jiri inuu ka dhexeeyo JWXO iyo Al-Shabaab.
Shirweynihiin JWXO ee 2013 waxaa si gaar ah loogu fiiriyay Wadahadlka Nabadeed. Waxay JWXO horey arintaa uga yeelatay shirar heer Guddi Fulin ah iyo midkanoo ahaa heer Guddi Dhexe. Dhamaan shirarkaa ajendaha asaasiga ah wuxuu ahaa sidii loo heli lahaa wado looga gudbo macangagimada xukuumadda Itobiya oo loo dhaqaajin lahaa wadahadalka nabadgalyada. Qodobo kale ayaa ka mid ahaa ajendaha laa hadlayo oy ka mid yihiin arimaha gudaha ee ururka, heerka uu marayo halganka, iyo dhibaatada uu gumaysiga ku hayo shacabka Somaliyeed ee Ogadenya. Guddiga SEMG ujeedadooda warbixintooda waa inay sumcada ka dilaan qofkasta oo xidiidh la leh Eretreeya. Hasa ahaatee, xidhiidhka saaxiibtinimo eek a dhexeeya sacabka Eretreeya iyo Somalida waa mid ka dhashay halganka dheer ee labada shacbi ay usoo mareen aaya-ka-tashigooda iyo ladagaalanka gumaysiga, taasoo ka horeysay xataa Gobanimada Jamhuuriyadda Somaliya. Ma aha xidhiidh bilowday 2002, sida ay guddiga SEMG u sawirayaan. Sidaa daraadeed JWXO waxay aad uga soo horjeedaa oy cambaareynaysaa beenta odhanaysa Eretreeya ayaa ka dambaysa oo ku dhiirigalisay JWXO inay Saldhig ka samaysato Somaliya.
Ugu dambayn, JWXO ma’aha urur qarsoodi. Soo qoridda magacyada xubnaha Guddiga Dhexe ee JWXO iyo dhaq-dhaqaaqa xubnaha waxay muujinaysaa in guddiga SEMG aanay xataa ixtiraamin arimaha shaqsiga u gaarka ah. Astaamaha lagu yaqaano mujtamaca ilaaliya sharciga waxaa ugu horeeya in la ixtiraamo waxyaabaha u gaarka shaqsiga, ilaa ay maxkamad xukunto dabagalka shaqsigaasi. Xukuumadda Itobiya oo ku sheegtay JWXO urur argagixisa ah ayaa sidaa daciifnimada ah ee guddiga SEMG oo kale aan marnaba u soo qorin magacyada xubnaha Golaha Dhexe.